Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493738 times)
« Reply #90 on: May 13, 2011, 04:20:47 PM »
မယား - ရှင် ကျွန်မဓါတ်ပုံ ကို နေ့တိုင်း ရုံးတက်တဲ့အိတ်ထဲထည့်ထည့်ထားတယ်။ ဘာလို့လဲ။
လင် - သြော် ဘယ်လောက် ကြီးမားတဲ့ အခက်ခဲ ကြုံရ ပါစေ မင်းဓါတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အားလုံးကို ကျော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်။
မယား - ကြည့်စမ်း၊ ကျွန်မ ဟာ ရှင့်အတွက် ဘယ်လောက်တောင် တန်ဖိုးရှိသလဲ နော်။
လင် - မဟုတ်ပါဘူးကွာ ၊ မင်းဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်မေးကြည့်တယ်
"ဒီထက်ဆိုးတဲ. အခက်အခဲ ဘာရှိနိုင်ဦးမှာလဲလို့"
« Reply #91 on: May 13, 2011, 04:25:53 PM »
ရဲ ၀န်ထမ်း တယောက် သည် တပတ်လုံး ညဆိုင်း တာဝန်ကျ နေရာ က တရက်မှာ သူ
အလုပ်စော ပြီး တာနဲ့ အိမ်ကို ခါတိုင်းထက် ၄နာရီ စောပြီး ပြန်လာပါတယ်။
ရဲဝန်ထမ်း ဟာ သူ့မိန်းမ အိပ်နေတာ အိပ်ရေးပျက်မှာ ဆိုးသည်နှင့်
မီးမဖွင့်တော့ပဲအမှောင်ထဲမှာ တင် ယူနီဖောင်း အင်္ကျီ ကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး
ကိုယ်လုံး ဗလာဖြင့် ခုတင်ပေါ် တက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ သူ့မိန်းမ က အလန့်တကြားနှင့်
မိန်းမ - "ယောင်္ကျား ရေ ဒီမှာ ခေါင်းကိုက်လိုသေတော့မယ် ။ ဟို ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့
ဆေးဆိုင်က ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးလေး သွားဝယ်ပေးပါလား ဟင်"
ရဲဝန်ထမ်း - "၀ယ်ပေးရမှာပေါ့ မိန်းမရယ်၊ ခဏလေးစောင့်နော်"
လို့ ဆိုပြီး ကမန်းကတန်း အင်္ကျီ ကောက်ဝတ်ပြီး ဆေးဆိုင်ကိုသွားပါတော့တယ်။
ဆေးဆိုင်ရောက်တော. အရောင်းဝန်ထမ်းက အံ့သြစွာဖြင့်
အရောင်းဝန်ထမ်း - "ခင်ဗျား က ဟိုဘက်မြို့နယ် က ရဲမဟုတ်လား"
ရဲဝန်ထမ်း - "ဟုတ်တယ်လေ ဘာလို့လဲ"
အရောင်းဝန်ထမ်း - "ဒါဆို ခင်ဗျားက ဘာလို့ မီးသတ်သမား ၀တ်စုံကြီး ၀တ်ထားရတာလဲ"
ရဲဝန်ထမ်း - "ဟေ
သူငယ်ချင်းတို့လည်း ရှေ့တန်းကိုပဲ ဖိပြီး နောက်တန်းကိုလည်း သေချာ ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုမယ် နော် ..
« Reply #92 on: May 13, 2011, 04:27:54 PM »
အိမ်ထောင်ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ယောက် က သူ့ရဲ့ small လေး ဆီကို
အလည်သွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ small လေးကလဲ သူ့ကိုတွေ့တိုင်း
Small လေး xx "ရှင့်ရဲ့ ပသိုင်းမွေး တွေ ကို ရိတ်လိုက်ပါလား ရှင်။ ဒါမှရှင်ရဲ့ အင်မတန် ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်းကြီး
အမျိုးသား xx "ငါ့အိမ်က အဖွားကြီးက အဲ့ဒီ အမွေးကို ကြိုက်တယ်ဟ။ ငါ့သာ
အဲ့ဒီ ပသိုင်းမွေး ကို ရိတ်လိုက် ရင် ငါကို သတ်မှာ။ ဒါဆို ချစ်လေးနဲ့ဝေးပြီ။"
Small လေး xx "တိုတို ကလဲ ရိတ်လိုက်ပါ ချို အဟွန့်အဟွန့်"
Small လေး ရဲ့ အချွဲကောင်းမူကြောင့် ထိုအမျိုးသားလဲ သူ့ရဲ.့ပသိုင်းမွေး
အဲဒီည မှာ ပဲ သူက ကျောပေးပြီး အိပ်နေသော သူ့မယားကြီး ခုတင်ပေါ်ကို
တိတ်တိတ်လေး တက်ပြီး လဲလိုက်စဉ်။ မယားကြီး က ရုတ်တရက် နိုးလာပြီး
လှည့်မကြည့်ပဲ သူ့ ရဲ့ မျက်နှာ ကို ပွတ်သတ်အာရုံခံလိုက်ခါ ပြောလိုက်ပုံက
"အမလေး ၊ ရှင်မပြန်သေးဘူးလား။ ခဏ နေရင် အိမ်က နွားကြီး ပြန်လာတော့မှာနော်"
« Reply #93 on: May 13, 2011, 07:23:15 PM »
အဖိုးကြီးကို သူ့သူငယ်ချင်းက ပြောပါတယ်။
“ခင်ဗျားမိန်းမ ကားဒရိုင်ဘာနဲ့ လိုက်ပြေးသွားတယ် လို့ ကြားလိုက်ရတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။”
“ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ကားမောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။”
ကုမ္ပဏီရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌက ထပြီး စကားပြောပါတယ်။
“ငါ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးမနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့သူ ဘယ်သူ ရှိသလဲ။”
အားလုံးငြိမ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဥက္ကဌက နောက်တစ်ခွန်း ထပ်မေးပါတယ်။
“ကောင်းပြီ။ ဒီလို ထားလိုက်။ ငါ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးမနဲ့ မရှုပ်တဲ့သူ ဘယ်သူ ရှိသလဲ။”
ဒီတစ်ခါလည်း အားလုံး ငြိမ်နေကြ ပြန်ပါတယ်။ အချိန်အတော်လေး ကြာမှ တစ်ယောက်က ထပြောပါတယ်။
“ကောင်းပြီ။ သူ့ကို အလုပ်ဖြုတ်တယ်။” ( ရီဒါဒိုင်ဂျက်(စ်) ကို ခရပ်ဒစ် ပေးပါသည်)
« Reply #94 on: May 14, 2011, 07:13:50 AM »
မင်း ငါ့ဆီက စာတွေကူးချနေတယ်ဆိုတာ ငါသိနေတယ်ဆိုတာလေး သိစေချင်ပါတယ်
ငါလဲ မင်းလိုပဲ စာလုံးဝမဖတ်ခဲ့ဘူးလေ။
အသက် ၁၃ နှစ်
သူ : မင်းကိုငါနမ်းလို့ရမလားဟင်?
သူမ: ဟိုမှာ ဖေဖေကြည့်နေတယ်။
အသက် ၁၅ နှစ်
သူ : မင်းကိုငါနမ်းလို့ရမလား?
သူမ : ပါးကို တစ်ချက်ပဲ နမ်းလို့ရမယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်
သူ: ကဲငါတို့လဲအရွယ်ရောက်ပြီ မင်းကိုငါ နနနန.....
« Last Edit: May 14, 2011, 07:15:48 AM by drlanmadawthar »
« Reply #95 on: May 14, 2011, 07:34:40 AM »
ချစ်သော ဖေဖေ နဲ့မေမေ
ဂျက်စမင်းလေးဟာ ညစ်ပတ်ပေရေပြီး အိမ်ခြေယာမဲ့ဖြစ်တဲ့ အာလာဒင် ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေပါတယ်။
စနိုးဝှိုက်ကလဲ ယောက်ျား ခုနှစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ တစ်အိမ်ထဲနေ နေပါတယ်။
ပီနိုချီယိုဟာ လူလိမ်တစ်ဦးဖြစ်သလို၊ ရော်ဘင်ဟုကလဲ သူခိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တာဇံ ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလဲ အဝတ်မပါပဲ လျှောက်သွားနေပြန်တယ်။
သူစိမ်းကောင်လေးတစ်ယောက်က အိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်မလေးကို နမ်းလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူတို့ လက်ထပ်လိုက်ကြရော။
စင်ဒရဲလားဟာလဲ သူ့အိမ်ကလူတွေမသိအောင် ခိုးထွက်ပြီး ပါတီသွားတတ်လိုက်သေးတယ်။
ဒါကြောင့် သားတို့ သမီးတို့ကိုမဆူပါနဲ့။ သားတို့က ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆိုးတတ် ညာတတ် ပုန်ကန်တတ်အောင် သင်ပေးခံထားရလို့ပါ။
သားသား နဲ့ မီးမီး
« Reply #96 on: May 14, 2011, 07:54:32 AM »
ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် ပရော်ဖတ်ဆာငယ်ငယ်လေးရဲ့ အခန်းထဲကိုဝင်လာသည်။
အခန်းထဲကို တချက် ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်သည်။ နောက်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး တောင်းပန်သံလေးဖြင့်
"ဒီစာမေးပွဲအောင်မယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်ပေးပါ့မယ် ဆရာ"
ဆရာနားသို့နီးကပ်လာအောင် ချဉ်းကပ်လာသည်၊ သူမ ဆံပင်ကို တချက်ပင့်တင်လိုက်ပြီး ဆရာ့အား ရီဝေစွာကြည့်လိုက်ကာလေသံတိုးတိုးဖြင့်
"ကျွန်မပြောတာက ဘာမဆို... ဘာမဆိုလုပ်ပေးပါ့မယ် ဆရာ"
ဆရာက သူမကိုတချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီး "ဘာမဆိုတကယ်လုပ်မှာလား?"
"တကယ် ဘာမဆိုလုပ်ပါ့မယ် ဆရာ"
အဲဒီမှာ ဆရာက လေသံတိုးတိုးလေးဖြင့် သူမအနားနားကပ်ကာပြောလိုက်သည်။
"သမီး ဒါဆို စာမှန်မှန်ကျက်လေ"
« Reply #97 on: May 14, 2011, 03:38:04 PM »
" PLAGIARISM "
" သူတစ်ပါး၏ အတွေးအခေါ်ကို ခိုးချခြင်း "
ရုရှား တက္ကသိုလ် ဆရာတစ်ဦး ပြောပြသော ဟာသ
မော်စကိုမြို့ ၏ နာမည်ကြီး ဆောင်းရက် တစ်ရက် ..။
အေးစက်လွန်းသော အခန်းထဲတွင်ထိုင်ပြီး ပါမောက္ခသည် အတန်းတင် စာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းသား
တစ်ဦးချင်းကို လူတွေ့စစ်မေးနေသည် ။ သုံးနာရီ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း အပြင်တွင် စောင့်နေ
သော ကျောင်းသားတွေ မကုန်သေး....။ သို့ နှင့် သူ့ အတွက် ကော်ဖီပူပူ ခါးခါးတစ်ခွက် ယူလာပေးရန်
ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို ဆရာကြီး မှာလိုက်သည် ။
ကျောင်းသားသည် အပြင်ဘက်ရှိ ကဖေးဆိုင်သို့ပြေးပြီး ကော့ညက်အရက် နှစ်ပက် မှာသည် ။ သံပုရာ
သီး တစ်ခြမ်း ထည့်ပြီး ဆရာကြီးထံ ယူလာသည် ။ ဆရာကြီး ခွက်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး သောက်ချလိုက်
သည် ။ ထို့ နောက် စာမေးပွဲ ဆက်စစ်သည် ။ ကျောင်းသား အားလုံး ဂရိတ်ဖိုး အထက် ရကြသည် ။
နောက်တစ်နေ့ တွင် ထို ပါမောက္ခပင် နောက် ကျောင်းသားအုပ်စုကို လူတွေ့စစ်မေးသည် ။ ချမ်းလာချိန်
တွင် မနေ့ ကအတိုင်း ကော်ဖီတစ်ခွက် ယူလာပေးရန် မှာသည် ။ မနေ့ က သတင်းကို ရထားပြီးသော
ကျောင်းသားသည် ကော့ညက်နှင့် သံပုရာသီး ပါသောခွက်ကို ဆရာကြီးထံ လာချပေးသည် ။ ဆရာကြီး
သောက်သည် ။ ကျောင်းသား တစ်ယောက်မကျန် ဂရိတ် သရီး ပဲ ရကြလေသည် ။
" ဘာကြောင့်လဲ " ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ပါမောက္ခကြီး ဤသို့ဖြေသည် ။
" PLAGIARIAM ကို ကျုပ် လက်မခံဘူးလေဗျာ..."
« Reply #98 on: May 14, 2011, 10:31:14 PM »
Quote from: tunaye2011 on May 14, 2011, 03:38:04 PM
ဒလောက်ကောင်းတဲ့ဟာကို ဘယ်သူ အနှုတ်ပြသွားလဲသိဘူးဗျ
ကျနော်လဲ အပေါင်းလုပ်တာပဲ။ ဒါမဲ့ တစ်ခုပဲရတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး
နှုတ်သွားတဲ့လူ plagiarism ဆိုတာကိုနားမလည်လို့ပဲဗျ။ အဲလို စတယ်ရာလေးကောင်းလေးတွေ လုပ်ပါဦး။
« Reply #99 on: May 16, 2011, 02:08:35 PM »
ကိုချူချာ တစ်ယောက် အခုတစ်လောအလွန်ဝလာသဖြင့်
အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း
သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကြော်ငြာက... သင်၏
အဆီများကျဖို့ကျွန်တော်တို့ ကတာဝန်ယူပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း
မည်မျှကျချင်ကြောင်းသာ ဖုန်းနံပါတ်...........သာဆက်သွယ်လိုက်ပါဟု တွေ
့ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့် ရာ တစ်ဖက်မှ...ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group
ပေါင်မည်မျှကျချင်ကြောင်း ပြောပြပါဟုပြန်ဖြေလေသည်။ ထိ်ုအခါ
တစ်ဖက်မှ...ဟုတ်ကဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ပြန်ဖြေလေသည်။ နောက်နေ့ မနက်
အိမ်တံခါးခေါက်၍ သွားဖွင့်ရာ....ငယ်ရွယ်ချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေး
တစ်ယောက် အားကစားဝတ်စုံ ၀တ်လျှက် စောင့်နေသည်ကို တွေ့ ရလေသည်။ သူမ၏
လည်ပင်းတွင် ကတ်ပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထား၍ ဖတ်ကြည့်ရာ.....
မိအောင်ဖမ်း..မိရင်နမ်း...ဟုတွေ့ ရသည်။ ထိုမိန်းကလေး က ဘာမှမပြောဘဲ
ပြေးထွက်သွားရာ ကိုချူချာလည်း မှီအောင်လိုက်ရတော့သည်။
၂မိုင်လောက်ပြေးလိုက်မှ ထိုမိန်းကလေးကို မိတော့သည်။ ဒီလိုနှင့်
ထိုမိန်းကလေးနောက်ပြေးလိုက်ရာ တစ်ပတ်မျှကြာသော်...အမှန် တစ်ကယ်ပင်
၅ပေါင်ကျသွားကြောင်းတွေ့ ရသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက်
အပျော်ကြီးပျော်သွားပြီး ယင်း Group အား ထပ်မံ၍ တစ်ပတ်အတွင်း
၁၀ပေါင်ကျချင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်သည်။ နောက်နေ့ တွင် ယခင်ကထက်
ပိုမိုချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့်စောင့်နေ
သည်ကို တွေ့ ရပြန်သည်။ ထိုမိန်းကလေး၏
တစ်ပတ်ပြည့်၍ ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ တစ်ကယ် ၁၀ပေါင်ကျသွားလေသည်။
ကိုချူချာတစ်ယောက် လောဘတက်လေပြီ။ ၂ ပတ်အတွင်း ပေါင် ၅၀
ကျချင်ကြောင်းအကြောင်းကြားရာ ထို Group က ထိုအစီအစဉ်မှာ လွန်စွာ
ပင်ပန်းကြောင်းနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါင်ချလျှင်လည်း
ရနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ သို့ သော်ကိုချူချာက
ရပါတယ်..ဒီလောက်တော့အပျော့ပေါ့ ဟုပြန်ပြောကာ ၂ ပတ်တွင်ပေါင် ၅၀
ကျရန်သဘောတူလိုက်သည်။ နောက်နေ့ မနက်ရောက်၍ ၀မ်းသာအားရ
တံခါးသွားဖွင့်ရာ....တံခါးတွင်...ထောင်ထောင်မောင်း မောင်း သန်သန်မာမာ
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ ရ၍ အံအားသင့်သွားသည်။ ထိုသူ၏ လည်ပင်းတွင်
ချိတ်ဆွဲထားသော ကတ်ပြားလေး၌...... လွတ်အောင်ပြေး...မိရင်နာမယ်..
Ko win bo